ဆဲလ်များကို ညွှန်းဆိုရာမှာ လိပ်စာ A1 B1 စတဲ့ အညွှန်းနဲ့ cell အတွင်းက ကိန်းဂဏန်းကို ဆိုကြပါတယ်။ အဲသည်မှာ relative reference နဲ့ absolute reference ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ သာမန် အပေါ်က အညွှန်းကတော့ relative reference ပါ။ A1 ဆိုတာ ကော်လံ A နဲ့ အတန်း 1 ဆုံရာ Cell လိပ်စာအညွှန်းပါ။ အဲသည် လိပ်စာအညွှန်းထဲ့ထားတဲ့ Cell ကို ကော်ပီကူးပြီး အခြား Cell အသစ်ကို ပေ့စ် လုပ်လိုက်ရင် ဆိုင်ရာအညွှန်းလိပ်စာလည်း (relative reference) လည်း လိုက်ပြောင်းပါတယ်။ absolute reference ဆိုတာကတော့ ပုံသေအညွှန်းလိပ်စာပါ။ A1 ထဲက ကိန်းကို အခြား Cell တွေကနေ ညွှန်းဆိုရင် သူက လိပ်စာအပြောင်းမရှိ ကိန်းသေအဖြစ် လိုက်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါကို ဥပမာတွေနဲ့ ရှင်းပြမှ ရှင်းပါလိမ့်မယ်။
to copy and fill relative and absolute references.
ဥပမာကတော့ A ကော်လံနဲ့ B ကော်လံက ဂဏန်း ၂ လုံးစီကို ပေါင်းပြီး C ကော်လံထဲ ကူးထည့်တယ် ဆိုကြပါစို့။
C1 မှာ ဖော်မြူလာကို =A1+B1 လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး C2 ဆီကို C1 က တွက်နည်းကို ကော်ပီပေ့စ် လုပ်လိုက်ရင် အလိုအလျောက် C2 = A2+B2 ပြောင်းသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါက ဆဲလ်ထဲက အညွှန်းဟာ ဆိုင်ရာအလိုက်ပြောင်းနိုင်တဲ့ လိပ်စာ - relatvie reference တွေ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ Sheet စာရင်းတွေမှာ ဒီလိုမျိုး အသုံးများတဲ့အတွက် relatvie cell တွေနဲ့ ညွှန်းပြီး ဖော်မြူလာတွေ ထည့်ကြလေ့ရှိပါတယ်။
အောက်က ဈေးရောင်းစာရင်းမှာ ဈေးနှုန်း၊ အရေအတွက်၊ တမျိုးချင်း ကျသင့်ငွေ (Unit Price, Quantity, Line Total) ကို စာရင်းလုပ်ထားပါတယ်။ Line Total ကော်လံမှာ ပစ္စည်းတခုချင်းစီ ကျသင့်ငွေ တွက်နည်း ဖော်မြူလာကို ထည့်ရပါတယ်။ ပထမပစ္စည်းကို တွက်ပြီးတာနဲ့ အဲသည်တွက်နည်းအတိုင်း ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်း တွက်လို့ ရတာမို့ ( line total = unit price X quantity) D4 မှာ relatvie refrence နဲ့ cell ကို ညွှန်းပြီး တွက်နည်း ဖော်မြူလာကို ထည့်ပါမယ်။
cell D4 ကို ရွေးပါ။
Enter the formula =B4*C4. ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်ပါ။
Press Enter လုပ်လိုက်ရင် ကျင့်သင့်ငွေကို တွေ့ရပါမယ်။
Select cell D4. ကို မောက်စ်နဲ့ ကလစ်ပါ။ fill handle ( + sign) ပေါ်လာအောင် ရွေ့ပါ။
Click and drag the fill handle ။ အဲသည်မှာ မောက်စ်ကို ဖိဆွဲပြီး D4 ကို D5:D13 တွေအထိ ကော်ပီ ပေ့စ် ဖြည့်လိုက်ပါ။
Release the mouse. မောက်စ်ကို လွှတ်လိုက်ပါ။ D4 တွက်နည်းက D5 ကနေ D13 ဖြည့်ပေးတဲ့အပြင် relative references အဖြစ် သက်ဆိုင်ရာ B X C ဆဲလ် တန်ဖိုးတွေကို မြှောက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
မယုံရင် D8 ကို double click လုပ်ကြည့်ပါ။ D8 = B8*C8 အဖြစ် သက်ဆိုင်ရာအညွှန်းအတိုင်း ပြောင်းပြီး ဖော်မြူလာ တွက်ထားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အချို့ကိစ္စရပ်တွေမှာတော့ cell တခုကို ညွှန်းဆိုရာမှာ လိပ်စာကို ကိန်းသေထားပြီး ညွှန်းရတာတွေ ရှိပါတယ်။ သူ့ကို ဖော်မြူလာထဲ ထည့်လိုက်တဲ့အခါ ဖော်မြူလာထည့်ထားတဲ့ cell ပြောင်းသွားတာ၊ ကော်ပီကူးပြီး နေရာရွှေ့သွားတာ ရှိပေမယ့် အဲသည် ကိန်းသေအညွှန်းကတော့ လိုက်ပြောင်းလို့ မဖြစ်တာ ရှိပါတယ်။ အဲသည်ကျရင် absolute reference ကို ဆဲလ်လိပ်စာမှာ dollar sign $ ရှေ့က တတ်ပြီး ညွှန်းရပါတယ်။ ကော်လံအလိုက်၊ အတန်းအလိုက်၊ ကော်လံနဲ့တန်း ဆုံရာ ဆဲလ်တခုချင်းအလိုက်ကို အသေညွှန်းတာမှာ သုံးပါတယ်။ အောက်က ညွှန်းဆိုပုံကို ကြည့်ပါ။
အတန်း တခုတည်း ကိန်းသေအညွှန်း
ကော်လ တခုတည်း ကိန်းသေအညွှန်း
ကိန်းသေတခုတည်းကို ယေဘူယျအားဖြင့် ညွှန်းကြလေ့ရှိတာမို့ အသုံးများတာကတော့ $A$2 ဖြစ်ပါတယ်။
ကိန်းသေအညွှန်းဖြင့် ဖော်မြူလာကို CELL များတွင် ကော်ပီပွားခြင်း
အောက်ဖော်ပြပါ ဥပမာမှာ E2 မှာ ထည့်ထားတဲ့ (tax rate) အခွန်နှုန်း 7.5% ကို ကိန်းသေအညွှန်း absolute reference ထားပါမယ်။ ကုန်ပစ္စည်းတခုချင်းစီရဲ့ အရောင်းမှာ ကျသင့်ငွေအလိုက် အခွန်တွက်ရာမှာ အခွန်နှုန်း 7.5% ကို ကိန်းသေအညွှန်းအနေနဲ့ မြှောက်ဖော်ကိန်းလုပ် တွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Sale tax ကို တွက်ရာမှာ - sale tax = unit price X quanitity X tax rate တွက်ရာမှာ unti price နဲ့ quanitity နေရာတွေ တန်ဖိုးတွေ ပြောင်းသွားသော်လည်း tax rate က e2 အတိုင်း ကိန်းသေအညွှန်း ဖြစ်ရမှာ မို့ သူ့ကို e2 လို့ မပြောဘဲ $E$2 လို့ absolute reference လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
D4 မှာ tax rate မြောက်ဖော်ကိန်းသုံးပြီး ကျသင့်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ sales tax ကို တွက်ကြရအောင်။
Enter the formula D4 = (B4*C4)*$E$2, $E$2 က absolute reference အဖြစ်ထားပါ။
Press Enter လိုက်ရင် ကျသင့်တဲ့ အခွန်နှုန်း ထွက်လာပါပြီ။
Cell D4 ကို fill handle ပေါ်အောင်လုပ်ပြီး အောက်ကို ဆွဲချ ကော်ပီ လုပ်ပါ။ အောက်က ကုန်ပစ္စည်းတခုချင်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ sale tax ကို တွက်ခိုင်းကြည့်ရမယ်။
(cells D5:D13) ကို D4 ဖော်မြူလာ ဖြည့်လိုက်ပါပြီ။
မောက်စ်ကို လွှတ်လိုက်ပါ၊ ကုန်ပစ္စည်းတခုချင်းအလိုက် ကျသင့်တဲ့ tax rate မြှောက်ဖော်ကိန်းနဲ့ တွက်ပေးထားတာကို တွေ့ရမယ်။
ပြန်စစ်ကြည့်ချင်ရင်တော့ D8 ကို ကလစ်လုပ်ကြည့်ပါ။ D8 = (B8*C8)*$E$2 လို့ တွေ့ရမယ်။ tax rate က အမြဲတန်း absolute reference ဖြစ်နေတာ မြင်ရမယ်။
မယုံရင် D4 = (B4*C4)Be sure to include the dollar sign ($) ကိုဖြုတ်ပြီး စမ်းကြည့်စေလိုပါတယ်။
#Value ဆိုပြီး ပေါ်လာရင် ဖော်မြူလာ မှားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါအတိုင်း ဈေးစာရင်းကို ဖော်မြူလာထည့်ပါ။ အဓိက absolute reference ကတော့ Discount rate ကို ၁၅% ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ discount ပေးပြီးတော့မှ line total ကို တခုချင်းစီအတွက် တွက်နည်းကို ထည့်ရပါမယ်။